I-Nel's Cottage, indlu yabucala nenoxolo - I-Airbnb
I-Nel's Cottage, indlu yabucala nenoxolo
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguCharlene
Zive usekhaya kwindlwana yethu ezolileyo eRynfield, eBenoni. Simi kufutshane nohola wendlela, indlela yeGautrain, iivenkile ezinkulu, iindawo zokutyela, iindawo zokuzilolonga kunye negalufa. Relax kwindlwana yethu enesitayile ebekwe emithini kunye negadi entle.
Indawo: Queen bed. Igumbi lokuhlambela elihle elinebhafu kunye neshawa. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Iti / ikofu, iWiFi yasimahla kunye nedesika yeofisi. Inkonzo yasekamelweni yemihla ngemihla ngaphandle kwangeempelaveki. Kukho indawo yokupaka ekhuselekileyo ngaphandle kwendlwana.
Le yindlu encinci ethandekayo ebekwe kwigadi entle. I-cottage ineemiphetho zangoku kwaye ihonjiswe kakuhle kakhulu. Kufuphi nesikhululo seenqwelomoya i-OR Tambo, i-Ebotse Golf Course, iBenoni Country Club. Iindawo zokutyela zifumaneka kwimizuzu emi-5 kude.
Le yindawo ebumelwaneni ezolileyo kakhulu. Izitrato zizaliswe yimithi emihle kwaye i-CR Swart Dam ikumgama wokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Charlene
Ndiyafumaneka kwimibuzo yam kwiselfowuni yam